Ukutya & Ukuqhuba kweNgxowa-mali - iBhanki yokutya yaseGalveston County
Ukutya neDrive Fund
1 kubemi aba-6 baseGalveston County bajongana nokunqongophala kokutya yonke imihla.
UNGENZA umehluko kummelwane osweleyo.
Bamba iDrive okanye iFund Drive!
Cofa apha ukukhuphela iPakethe yokutya neNgxowa-mali yokutya
Cofa apha ukujonga uluhlu lwethu lwangoku lweAmazonSmile Charity
Cofa i-logo yethu ukukhuphela isiGaba seSisombululo esiPhakamileyo kwizinto zakho zokuThengisa
Ukutya okuqhubela phambili kweNyanga
Izinto ezizayo zeNyanga
Nxibelelana noJulie Morreale ku Julie@galvestoncountyfoodbank.org
Ukutya okuqhutywa ngee-FAQs
Ngubani onokubamba idrive yokutya?
Nabani na ofuna ukunceda ukuphelisa indlala anokubamba ukutya. Abantu, iintsapho, amaqela, iiklabhu, imibutho, iicawe, amashishini, izikolo, njl.
Zeziphi izinto ozamkelayo xa uqhuba ukutya?
Samkela zonke iintlobo zokutya okungonakaliyo ezishelfini ezizinzileyo kwaye ziyenzayo hayi ifuna ifriji.
Izinto ezomileyo ezinje ngerayisi, iimbotyi, ipasta, isiriyeli, ioatmeal, njl.
Izinto ezinziweyo ezifana neesuphu, imifuno, ityhuna, inkukhu, iimbotyi, njl.
Iimpahla ze-Pop-top ezinqiniweyo kunye nezinto ezilula ezivulekileyo ziyaxatyiswa
Uyazamkela izinto ezingezizo zokutya?
Ewe, siyazamkela nezinto zempilo ezinje;
Zeziphi izinto ezingamkelekanga?
Izinto zokutya ezenziwe ekhaya
ukutya okonakalayo okufuna ifriji
izinto ezinemihla ephelelwe lixesha
izinto ezinamazinyo okanye ezonakeleyo.
Zeziphi iindlela ezilungileyo zokubamba idrive yokutya?
Chonga umnxibelelanisi oza kubeka iliso kumtya wokutya.
Khetha iNjongo malunga nokuba ungatya ukutya okungakanani.
Khetha imihla onqwenela ukuqhuba ngayo ukutya kwakho.
Khetha iNdawo yakho yokuqokelela izinto, indawo enezithuthi ezininzi ekhuselekileyo.
Bhalisa kwi-GCFB ngokungenisa ifom egcwalisiweyo yokuthatha inxaxheba kwiFood & Fund Drive.
Nyusa iDrive yakho ukuze wazise abanye ngomnyhadala wakho ngoonobumba, i-imeyile, iiflaya kunye newebhusayithi.
Khuphela ipakethe yeDrive & Fund Drive
Zeziphi ezinye iindlela zokuqhuba ukutya?
Izinto zesidlo sakusasa: Isiriyeli, i-oatmeal, imivalo yokutya okuziinkozo, isidlo sakusasa kwangoko, umxube wepancake, njl.
Iintandokazi zaBantwana: ijusi, ibhotolo yamandongomane, imivalo yegranola, imacaroni kunye netshizi, Chef Boyardee, isiriyeli
Ixesha lesidlo: I-Pastas, isosi yaseMarinara, iinyama ezinqiniweyo ezifana nenkuku okanye ityhuna, "Ukutya-ebhokisini" okufana neTuna Helper, uBetty Crocker Helper Ukutya okuGqibeleleyo, njl.
Isidlo sasemini seBrown: Khuthaza iqela lakho ukuba lize nesidlo sasemini seengxowa emdaka kwaye linikele ngemali elaliya kuyisebenzisa kwisidlo sasemini.
Sebenzisa ukhuphiswano lobuhlobo ukwenza ukuba iqela lakho likhuthazwe nangakumbi kukunika. Yenza amaqela phakathi kwamagumbi okufundela, amasebe, amaqela, imigangatho, njl.njl.ukujonga ukuba ngubani oqokelela okona kutya. Qinisekisa ukuba "abaphumeleleyo" bafumana ingqalelo ekhethekileyo kwigalelo labo.
Buza ukuba ngaba inkampani yakho inokutshatisa na umnikelo wakho wokutya kwiGalveston County Food Bank ngokumisela inani ledola elinikelwe ngeponti yokutya eqokelelweyo. Nxibelelana neSebe Lemicimbi Yabasebenzi malunga nenkqubo yomdlalo wezezimali.
Ndilubhengeza njani uhambo lwam lokutya?
Yabelana ngokutya kwakho kwimithombo yeendaba kwezentlalo, iileta zeendaba, iibhulethini, izibhengezo, iiflaya, iimemo, ii-e-blast kunye neeposta.
Kukho isisombululo esiphezulu se-logo yeGCFB kweli phepha lifumanekayo lokukhuphela. Nceda ufake ilogo yethu kuyo nayiphi na into yokuthengisa oyenzela umcimbi wokuqhuba ukutya. Ukufumana ezinye iingcebiso malunga nokwenza izinto zokuthengisa khuphela ipakethi yokutya kunye neNgxowa yeDrive.
Singathanda ukuxhasa umcimbi wakho! Qiniseka ukuba wabelana neeflaya zakho nathi, ukuze siwukhuthaze umcimbi wakho kumaqonga eendaba ezentlalo.
Qiniseka ukuba usimakishe kwimidiya yoluntu!
Ukupapashwa sisitshixo sokuqhuba ngempumelelo!
Ndiwuthatha phi umnikelo wam?
Zonke izinto ezinikelweyo zamkelwe kwindawo yokugcina yethu ebalaseleyo ibekwe kwi-624 4th Ave N, eTexas City, TX. 77590. NgoMvulo-Lwesihlanu ngeye-8 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-3.
Ngaba i-GCFB iyayithatha iminikelo?
Iipikethi zokutya zokutya ziye zingabizi iindleko xa sicwangcisa iipopu ezincinci. Siyacela ukuba isixa sokutya esiqokelelweyo sincinci kunoko sinokulingana ngasemva kwilori egcweleyo yokuthwala, nceda usise kwindawo yethu yokugcina izinto ngo-624 4th Ave N, eTexas City, ngoMvulo-ngolwesiHlanu ukusuka nge-8 kusasa ukuya kwi-3 ngokuhlwa. (Nceda ufowunele ngaphambi kokuziswa ukwazisa abasebenzi) Ngeminikelo emikhulu, nceda unxibelelane noJulie Morreale kule nombolo 409-945-4232.
Ii-FAQ zeDrive Drive
Yintoni i-fund drive?
Ukuqhutywa kwengxowa-mali kulapho uqokelela khona umnikelo wemali kwisipho kwibhanki yokutya ukunceda ukuxhasa iinkqubo ezininzi ezijolise ekunikezeleni ukutya kwabo basweleyo.
Ngaba kungcono ukunikela ngemali kunokutya?
Zombini imali kunye nokutya kunceda kakhulu ukuxhasa imishini yethu yokukhokela umlo wokuphelisa indlala. Nge-GCFB njengelungu le-Feeding America kunye ne-Feeding Texas, amandla ethu okuthenga asivumela ukuba sikhuphe izidlo ezi-4 kuyo yonke i- $ 1, esisinika amandla okuthenga ukutya okungaphezulu kunokuba abantu banokuya kwivenkile yokutya.
Inokuqokelelwa njani imali yokuqhuba ingxowa-mali?
Imali inokuqokelelwa njengemali, itshekhi okanye i-intanethi kwiwebhusayithi yethu, www.bangcangco.com.
Ngemali, ukuba abantu abanika imali bafuna ukufumana irisithi etsalwa kwirhafu, nceda ufake igama labo elipheleleyo, idilesi yokuthumela, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni kunye nemali ezinkozo.
Ukujonga, nceda uhlawule kwiGalveston County Food Bank. Qaphela umbutho / igama leqela lakho ngasezantsi ngasekhohlo kwetsheki, ukuze umsitho wakho ufumane ikhredithi. Jonga ipakethe yeDrive & Fund yeDrive ngokomzekelo.
Kwi-Intanethi, xa ufaka iDrive & Fund Drive yakho egqityiweyo usixelele ukuba ungathanda ukukhuthaza iminikelo ekwi-Intanethi kwaye kungongezwa ukongeza kwithebhu kwimenyu eyehlayo, ukuze umcimbi wakho wokutya uzokufumana ikhredithi kwiminikelo yezemali ekwi-Intanethi.
Ndingayiqala njani i-online fundraiser?
Kulula ukuqala ukuqokelela imali kwi-Intanethi ngokundwendwela iphepha lethu le-JustGiving Apha . Yenza iphepha ngokwezifiso, setha injongo kwaye emva koko wabelane ngekhonkco kwiphepha lakho lokunyusa ingxowa kwi-Intanethi nge-imeyile okanye ku-facebook naku-twitter ukusasaza igama.
Nceda uqiniseke ukusimaka kwimidiya yoluntu.